Breaking: नेप्सेको जीएमका लागि ३ जना सिफारिस, सीताराम र प्रविण दुबै आउट !
ARCHIVE, SPECIAL » Breaking: नेप्सेको जीएमका लागि ३ जना सिफारिस, सीताराम र प्रविण दुबै आउट !
काठमाडौँ- नेप्सेको जीएम पदका लागि टप थ्रीको नाम सिफारिस भएको छ । छनोट समितिले केहि बेरअघि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । सिफारिस हुनेमा चन्द्र सिंह साउद, प्रमोद राज शर्मा र मनोज ज्ञवाली रहेका छन् ।
चन्द्र सिंह साउद चर्को राजनीतिक दवावका बीच छानिएका छन् भने मनोज ज्ञवालीलाई छनोट समितिले नै अडान राखेरै सिफारिस गरेको थियो । सीताराम थपलिया र प्रविण पन्दाक बीच को हुने भन्ने कुरामा छनोट समिति र राजनीतिक शक्तिबीच चर्काचर्की हुँदा अन्तमा कोहि पनि नराख्ने र प्रमोद राज शर्मालाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो ।
'छनोट समितिले प्रवीण पन्दाकलाई लैजान चाहान्थ्यो भने राजनीतिक लवीङ थपलियाका लागि थियो । अन्तमा यी दुइ मध्ये कोहि पनि नहुने भन्दै सहमति भयो र एक राज्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रमोद शर्मा सिफारिसमा परे ।' स्रोतले अर्थ सरोकार डटकमसँग भन्यो ।
अवको आउँदो क्याबिनेटले यी मध्ये एक जनालाई नेप्सेको जीएम बनाउनेछ ।